Goynta Laser ee Mashiinka Filter, Waxyaabaha Filter, Media sifeynta - Goldenlaser
Xalka Goynta Laser ee Warbaahinta Filter
Si otomaatig ah, dhakhso leh oo sax ah u shaqeynaya oo ah dhar sifeyn ah oo leh makiinado goyn kara laser CO2 oo ka imanaya goldenlaser
Hordhaca Warshadaha Hordhac
Iyada oo ah geedi socodka ilaalinta iyo ilaalinta deegaanka ee muhiimka ah, sifeynta ayaa si ballaaran loogu isticmaalay dhinacyo badan, laga bilaabo kala-soocida gaaska-adag ee warshadaha, kala-soocida gaaska-dareeraha, kala-soocida dareeraha adag, kala-goynta adag-adag, nadiifinta hawada iyo isdaahirinta biyaha ee guriga maalin kasta. qalabka. Codsiyada gaarka ah waxaa ka mid ah daaweynta qiiqa gaaska qashinka ee dhirta korontada, dhirta birta, dhirta sibidhka, sifeynta hawada ee dharka iyo warshadaha dharka, daaweynta bullaacadaha, sifeynta iyo dhagxaanta warshadaha kiimikada, sifeynta hawada ee warshadaha baabuurta, sifeynta wareegga saliida, iyo sifeynta hawada ee qoyska. hawo qaboojiyeyaasha iyo nadiifiyeyaasha faakiyuumka.
Waqtigan xaadirka ah, qalabka miiraha ayaa badanaa ah qalabka fiber, dharka la tolay. Gaar ahaan, maaddada fiber-ka ayaa inta badan ah fiilooyin dabiici ah sida suufka, dhogorta, linenka, xariirka, fiyuuska viscose, polypropylene, nylon, polyester, polyurethane, aramid, iyo sidoo kale fiber galaas, fiber dhoobada, birta birta, iwm.
Iyada oo balaadhinta isdaba jooga ah ee goobaha codeynta ee sifeynta, qalabka shaandhada cusub ayaa si joogto ah u soo ifbaxaya, iyo alaabooyinka sifeynta waxay u kala baxaan maro saxaafadeed filter, dharka boodhka, bacda boodhka, shaashadda filter, kartoonka filter, foosto filter, miirayaasha, sifeeyo filter si element .
Goldenlaser waxay siisaa dharka CO₂ laser goynta dharka farsamada
Qaab weyn oo Mashiinka goynta leysarka CO2 ah ayaa ku habboon goynta dhexdhexaadinta sifeynta iyada oo ay ugu wacan tahay habka xiriir la'aanta iyo saxsanaanta sare ee lagu gaaro laydhka laser Intaa waxaa dheer, habka leysarka kuleylka ah wuxuu hubiyaa in geesaha jarista si otomaatig ah loo xiro marka la jarayo dharka farsamada. Maaddaama dharka miiraha laydhka la gooyey uusan ka jajabinayn, hawsha ku xigta ayaa fududaanaysa.
Aalado aad u sareeya
Tiknoolajiyada laser-ka-goynta ee natiijooyinka ugu wanaagsan
Faa'iidooyinka noocee ah ayaa mashiinnada goynta laser-ka ee 'laserlaser CO2' ay u leeyihiin jarista warbaahinta filter?
Goynta laser-ka ayaa noqdey mid u janjeera warshadaha shaandhada
Daabac otomaatiga ah ee geesaha jarista ayaa ka hortageysa geesaha
Ma jiro qalab duug ah - tayo la'aan
Sax sare iyo saxnaanta soo noqoshada
Dabacsanaanta sare ee wax soo saarka sababtoo ah xulashooyinka dheeraadka ah ee kala duwan
Nidaamka wax soo saarka otomaatiga ah ee qaada qalabka wax lagu raro iyo quudinta
Nidaamyada calaamadeynta ee noocyo kala duwan: Mashiinka daabacaha Inkjet iyo qaybta calaamadeynta Ink
Qiiq dhammaystiran iyo shaandhaynta qiiqa goynta ee suurtogalka ah
Xulasho kala duwan oo ah miisaska kala duwan - oo leh xulashooyin ku habboon dhammaan cabbirka shaandhada
Qaababka dharka saxda ah ayaa lagu samayn karaa iyada oo loo marayo barnaamijka CAD loona beddelo kuwa wax gooya laser-ga CO2. Waxaa laguu dammaanad qaadayaa saxsanaanta, xawaaraha iyo kan ugu dambeeya ee tayada wax-qabadka warbaahinta shaandheeya.
Codsiyada warshadaha shaandhada
• Bacaha aruurinta boorka / Filtration maro saxafadeed / suumanka sifeynta Warshadaha / Kaydadka miiraha / Waraaqda Filter / Mesh dhar
• Sifeynta Hawada / Fiiqa / Sifeynta dareeraha / dhar farsamo
• Suuq-geynta / Boorka Sifeynta / Baaritaanka / Sifeynta adag
Sifeynta biyaha / Sifeynta cuntada / Sifeynta warshadaha
Sifeynta Macdanta / Sifeynta saliidda iyo gaaska / Saxarka iyo sifeynta warqadda
• Waxyaalaha kala firidhsan hawada
Waa maxay dalabkaagu?
Qalabka miiraha ee ku habboon goynta laser-ka
Mashiinka miiraha, fiber galaaska, dharka aan tolnayn, warqad, xumbo, cudbi, polypropylene, polyester, polyamides, nylon, PTFE, marinka sox iyo dharka kale ee warshadaha.
Eeg Muunado Dheeraad ah oo ay Sameeyeen Laser
Waxaan kugula talineynaa mashiinnada leysarka CO2 ee goynta dharka miiraha
JMC Taxanaha CO2 Flatbed Laser Mashiinka Mashiinka
Gear iyo hayayaashii waday
Aag shaqo oo qaab weyn ah
Qaab dhismeedka buuxa
Xawaare sare, saxnaan sare, aad otomaatig u ah
Awood sare CO2 biraha RF laser ka 300 watts, 600 watts ilaa 800 watts
Baadh Mashiinnada Mashiinka Jarida Laser ee CO2
GOLDENLASER JMC Taxanaha Xawaaraha Sare Saxsanaanta Sare CO2 Flat Bed Laser Cutter in Details
Nidaamka wadista saxda ah ee saxda ah & qalabka wadida. Xawaaraha goynta illaa 1200m / s, ACC illaa 10000mm / s 2, waxay ilaalisaa xasilloonida muddada-dheer.
Heer caalami ah CO2 koronto-dhaliyaha laser laser, xasiloon oo waara.
Miiska faakiyuumka nuugaya miiska xamuulka qaada. Fidsan, otomaatig ah, milicsiga hooseeya ee ka soo baxa leerka.
Waxtarka sare "INK JET PRINTER" oo ay weheliso goynta isla waqtigaas.
1. Daabac goobada 2. Goynta goobada
Sax Quudin Quudinta
Auto-quudiyaha: Saxitaanka xiisadda iyo quudinta leh cutter laser si quudin joogto ah iyo goynta.
Xuquuqda aqooneed ee madaxa bannaan. Nidaamka xakamaynta kartoo loogu talagalay dharka warshadaha.
YASKAWA Mashiinka adeegga
Japanese YASKAWA Mashiinka adeegga. Sax sare, xawaare deggan, awood xad dhaaf ah.
Nidaamka Kala-soocida otomaatiga ah
Nidaam kala-soocid buuxda. Samee maaddada quudinta, goynta, kala-soocidda hal mar.
si loo doorto GOLDENLASER JMC SERIES CO2 Mashiinka Goynta Laser
1. Xaqiijinta quudinta xiisadda
Ma jiro quudhiye xiisad fududaan doonta inay qalloociso kala duwanaanta habka quudinta, taasoo keenta in saxitaanka caadiga ah uu ku badiyo shaqadiisu; Shekeysan xiisad in dhamaystiran go'an on labada dhinac ee wax waqti isku mid ah, iyadoo si toos ah jiidaan bixinta maro by duuban, oo dhan geeddi-socodka la xiisad, waxay noqon doontaa saxitaanka kaamil ah iyo sax quudinta.
2. Goynta xawaaraha sare
Nidaamka mootada iyo pinion ee ku qalabeysan tuubada leysarka awoodda sare leh, wuxuu gaarayaa ilaa 1200 mm / s xawaaraha goynta, 8000 mm / s 2xawaaraha dardargelinta.
3. Nidaamka kala soocida otomaatiga ah
Nidaam kala-soocid buuxda. Quudinta maaddada, goynta, kala-soocidda hal mar.
4. Goobaha shaqada waa loo habeyn karaa
2300mm × 2300mm (90.5 inch × 90.5 inch), 2500mm × 3000mm (98.4in × 118in), 3000mm × 3000mm (118in × 118in), Ama ikhtiyaar. Aagga shaqada ugu weyn waa illaa 3200mm × 12000mm (126in × 472.4in)
U fiirso mashiinka goynta leysarka dharka miiraha tallaabo!
Waxaan haynaa tiknoolajiyad farsameyn oo dhameystiran, oo ay ku jiraan goynta laser, xardho laser, daloolin laser iyo laser sixitaanka. Waxaan haynaa qaddar aad u tiro badan oo xog ururinta habka leysarka ah. Waxaan ku tijaabin karnaa qalabkaaga mashiinadeena leysarka, waxaanna hagaajin karnaa socodka nidaamka. Muunado tijaabinaya fiidiyowga, xuduudaha ka shaqeynta iyo macluumaadka kale ee la xiriira ayaa lagu bixiyaa lacag la'aan.
Tag tusaalaha tusaalaha
Waxaan ku xirneyn macaamiisha, waxaan si qoto dheer u baareyneynaa baahiyaha warshadaha, waxaanna siineynaa xalal codsi leysarka dhijitaalka ah, dhiirigelinta isbedelka iyo casriyeynta warshadaha dhaqameed, iyo ka caawinta dadka isticmaala inay hal-abuurnimo iyo horumar yeeshaan. LASERKA DAHABKA ah wuxuu ku lug leeyahay arimo badan oo dalabyo ah, xalal dhowr ah ayaa ku jira heerka hogaaminta warshadaha.